विश्वासको मत नपाए पनि ओली नै प्रधानमन्त्री ? के भन्छन् विज्ञ ? - Himali Patrika
विश्वासको मत नपाए पनि ओली नै प्रधानमन्त्री ? के भन्छन् विज्ञ ?
हिमाली पत्रिका २७ बैशाख २०७८, 8:10 pm
सोमबार अपरान्ह १ बजेदेखि सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन मतदान भयो । संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि कम्तिमा १३६ सांसद चाहिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९३ मत मात्रै पाए । एमालेका २८ सांसदले ओलीलाई मत दिएनन् । जसपाको मत पनि ओलीले पाएनन् ।
यसअघि नै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, अहिले नेकपा भन्ने दलको मान्यता खारेज भई अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी रहेको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका थिए र उनले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।
सोमबारको मतदानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ । यही सन्दर्भमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु अग्नि खरेल र रमणकुमार श्रेष्ठसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।
फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् : डा. भीमार्जुन आचार्य
अहिलेको सरकार भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार हो । तर यो सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा अब यही प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ भन्न अलि कठिन नै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि पनि प्रक्रिया त जसरी पनि अगाडि बढ्ला नै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको अवस्थामा ७६ (२) कै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामाचाहिँ के हुन्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
सरकार बन्न नसके संसद विघटनमै जाने हो : अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । अब यो कुरा सभामुखले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनु हुन्छ होला । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त लेखेर पठाउनु नै प¥यो । संसदको परिणाम के आयो भनेर सभामुखले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनुहुन्छ ।
उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा रहनुहुन्न । रहनुहुन्न यो अर्थमा भनेको कि त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन्छ । अनि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) मा नै जान्छ होला । त्यो भनेको राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन सकेको अवस्थामा समर्थन लिएर आउने दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । ७६ (२) मा भएन भने त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
तर नयाँ प्रधानमन्त्री नबनेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था भने आउने छैन । किनभने, उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्छन् र अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन्छ । ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा ७६ (३) अनुसार ठूला दलको हैसियतले फेरि पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । कि त संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनुपर्यो । होइन भने ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।
त्यसपछि फेरि विश्वासको मत लिनैपर्छ ।
तर, पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संसदका कुनै सदस्यले आफूले बहुमत पुराउन सक्ने आधार देखाएमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । तर, त्यो सम्भावना ज्यादै कम छ । तर, कुनै उपाय नै भएन भने जाने त ७६ (७) अर्थात् संसद विघटन गरेर अर्को निर्वाचनमा नै हो ।
फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र प्रदेशको खोरजी हुन सक्छ : रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
गण्डकी प्रदेशको अवस्था हेर्नुभएकै होला नि, यहाँ पनि हुने त्यही त हो । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि ३ दिनको समय दिनुहुन्छ । तर, ३ दिनमा सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि जाने भनेको ७६ (३) मा नै त हो । ७६ (३) बमोजिम कै सरकार बन्ने हो र त्यो भनेको फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।
तर, फेरि उनी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने कि नमिल्ने कुरा गर्नुहोला । तर, तपाइँले देशको संविधान होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको संविधान हेर्नुहोस् न । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि राजीनामा दिँदैनन् । माधव नेपालहरुले राजीनामा नदिएपछि के हुने भयो भने ठूलो दल त फेरि पनि एमाले नै हुने भयो । किनभने सरकार बनाउन १३६ जना सांसद चाहिन्छ र त्यो माओवादी, काँग्रेस र उपेन्द्र यादवहरु मिल्दा पनि पूरा हुन सक्दैन । अनि त्यो सङ्ख्या नपुगेपछि ३ दिनभित्र सरकार बन्न सक्दैन । ३ दिनभित्र सरकार नबनेपछि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । त्यसपछि पनि चुनाव हुँदैन । किनभने हार्ने चुनाव कसैले गर्न चाहन्न । अब कुन कुन धारा प्रयोग हुने हो हेर्दै जानुपर्छ ।
यहीबीचमा राजा आउने हल्ला छ, संघीयता खारेज हुने, प्रदेश खारेज हुने कुरा छ । त्यसकारण तपाईले नेपालको संविधान हेर्ने होइन कि खड्गप्रसाद ओलीको खल्तीको संविधान हेर्नुहोस् । उनी संसद विघटन गराएर पनि चुनाव गराउन चाहने व्यक्ति होइनन् । बरु जसरी हुन्छ, आफैं प्रधानमन्त्री बनिरहने बाटोमा छन् र उनी नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छन् ।